ကိုယျ့ကိုယျကို ပြျောအောငျ ထားတတျဖို့လိုတယျ – Shinyoon
ကိုယျ့ကိုယျကို ပြျောအောငျ ထားတတျဖို့လိုတယျ
November 17, 2020 by Shin Yoon
အငိုနဲ့ စခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ . . .ဆကျပွီးပဲ ငိုနလေို့မရဘူး ။ လောကဓံဆိုတာ လူတိုငျးကွုံရတဲ့အရာပါ ငါ့ကမြှ ကံဆိုးလခွေငျးဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ကိုယျတဈယောကျတညျး ကမ်ဘာပကျြနသေလိုမြိုး ခံစားမနပေါနဲ့ ။ အဆငျမပွမှေုတှကွေားမှာ အဆငျပွအေောငျနတေတျတာလဲ ရငျ့ကကျြခွငျးတဈမြိုးပါပဲ ။
ပြျောရာမှာ မနရေ တျောရမှာနရေဆိုတဲ့စကားလဲ ရှိတယျမဟုတျလား ။ နရေတဲ့အရပျတိုငျးက ပြျောရလိမျ့မယျလို့အာမခံခကျြပေးမထားတာ သိထားဖို့လိုပါတယျ ။ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့အရာတှနေဲ့ ဖွဈနတေဲ့အရာတှကေို လကျသငျ့ခံနိုငျတဲ့ အငျအားရှိနဖေို့လိုတယျ ဒီလိုလကျသငျ့ခံနိုငျတဲ့အငျအားရှိနမှေ ကိုယျ့စိတျကိုယျကို ပြျောအောငျ နဖေို့အခှငျ့အရေးတှေ ရှိလာမှာပါ ။
တဈစုံတဈယောကျတော့ ငါ့ကို ပြျောအောငျထားမှာပါဆိုတဲ့အတှေး တှေ ယောငျလို့တောငျ ကိုယျ့ခေါငျးထဲ ၀ငျမလာစနေဲ့ ကိုယျပြျောအောငျထားဖို့ဆိုတာ ဘယျသူ့မှာမှ တာဝနျရှိနတောမဟုတျဘူးလေ ကိုယျပြျောဖို့ဆိုတာ ကိုယျ့မှာပဲ တာဝနျရှိပါတယျ ဒီအတှကျတခွားတဈယောကျ ဖနျတီးပေးမယျ့ ပြျောရှငျမှုတှကေို စောငျ့ဆိုငျးနတောထကျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ဖနျတီးယူတတျဖို့လိုတယျ
သောကတှရှေိနပေမေယျ့ . . . အလှဆုံးပွုံးတတျအောငျ …နပေါ ။ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ရှိတဲ့အရာတိုငျးကို တဈဖကျလူက နားလညျပေးမှာမဟုတျဘူး ကိုယျဘာဖွဈနလေဲ ဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ နားလညျဖို့လိုပါတယျ ။ ဒုက်ခတှရှေိလာတဲ့အခါ …အဆငျပွအေောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ကွိုးစားပါ …
တဈယောကျတညျးရှိနတေဲ့အခါ … တဈယောကျတညျးပြျောအောငျ နတေတျဖို့လိုပါတယျ ။ တခွားတဈယောကျ ကွောငျ့ ပြျောရတဲ့အပြျောဆိုတာ အခြိနျအကနျ့တဈခုထိပဲ ခံတတျပါတယျ ။ ဘယျသူမှ မရှိပမေယျ့ ကိုယျတဈယောကျတညျးလညျး ပြျောပြျောနရေငျ ဘယျတော့မှ အထီးကနျြစရာမလိုတော့ဘူး ။
လောက …အငိုနဲ့စခဲ့တဲ့ လောကမှာ ပြျောအောငျနတေတျဖို့လိုပါတယျ ။ ဘ၀ဆိုတာ …နှဈကာလတှနေဲ့တှကျတဲ့အခါ ရှညျကွာလှနျးတယျလို့ထငျရပမေယျ့ တဈနှဈ တဈနှဈဆိုတာ မကျြစိတဈမှိတျအတှငျး ကုနျသှားတာပဲလေ ။ တကယျဆိုရငျ ဘ၀က တိုတိုလေးပါ ..အဲ့ဒီ ရတဲ့အခြိနျတိုတိုလေးအတှငျးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပြျောအောငျ ထားတတျဖို့လိုတယျ ။
အငိုနဲ့ စခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ . . .ဆက်ပြီးပဲ ငိုနေလို့မရဘူး ။ လောကဓံဆိုတာ လူတိုင်းကြုံရတဲ့အရာပါ ငါ့ကျမှ ကံဆိုးလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာပျက်နေသလိုမျိုး ခံစားမနေပါနဲ့ ။ အဆင်မပြေမှုတွေကြားမှာ အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တာလဲ ရင့်ကျက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။
ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရမှာနေရဆိုတဲ့စကားလဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား ။ နေရတဲ့အရပ်တိုင်းက ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့အာမခံချက်ပေးမထားတာ သိထားဖို့လိုပါတယ် ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ အင်အားရှိနေဖို့လိုတယ် ဒီလိုလက်သင့်ခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေမှ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို ပျော်အောင် နေဖို့အခွင့်အရေးတွေ ရှိလာမှာပါ ။
တစ်စုံတစ်ယောက်တော့ ငါ့ကို ပျော်အောင်ထားမှာပါဆိုတဲ့အတွေး တွေ ယောင်လို့တောင် ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ၀င်မလာစေနဲ့ ကိုယ်ပျော်အောင်ထားဖို့ဆိုတာ ဘယ်သူ့မှာမှ တာဝန်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ်ပျော်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ် ဒီအတွက်တခြားတစ်ယောက် ဖန်တီးပေးမယ့် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို စောင့်ဆိုင်းနေတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖန်တီးယူတတ်ဖို့လိုတယ်
သောကတွေရှိနေပေမယ့် . . . အလှဆုံးပြုံးတတ်အောင် …နေပါ ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အရာတိုင်းကို တစ်ဖက်လူက နားလည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ နားလည်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဒုက္ခတွေရှိလာတဲ့အခါ …အဆင်ပြေအောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားပါ …
တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါ … တစ်ယောက်တည်းပျော်အောင် နေတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ တခြားတစ်ယောက် ကြောင့် ပျော်ရတဲ့အပျော်ဆိုတာ အချိန်အကန့်တစ်ခုထိပဲ ခံတတ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူမှ မရှိပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလည်း ပျော်ပျော်နေရင် ဘယ်တော့မှ အထီးကျန်စရာမလိုတော့ဘူး ။
လောက …အငိုနဲ့စခဲ့တဲ့ လောကမှာ ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဘ၀ဆိုတာ …နှစ်ကာလတွေနဲ့တွက်တဲ့အခါ ရှည်ကြာလွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တစ်နှစ် တစ်နှစ်ဆိုတာ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ကုန်သွားတာပဲလေ ။ တကယ်ဆိုရင် ဘ၀က တိုတိုလေးပါ ..အဲ့ဒီ ရတဲ့အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင် ထားတတ်ဖို့လိုတယ် ။
ကြှနျမကို ပဈထားတတျတဲ့ ကြှနျမခဈြသူ
ကိုယျနဲ့ မထိုကျတနျမှနျးသိတဲ့အခါ စှနျ့လှတျတတျပါစေ